မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါတွေ ထိန်းမရအောင် ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီ… – PVTV Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါတွေ ထိန်းမရအောင် ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီ…
·7months ago ·14 Comments
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါတွေ ထိန်းမရအောင် ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟားငါးကောင်အဖွဲ့ ဘာတွေပြောထားသလဲ ဆိုတာကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
“နွေဦးထဲက ကဗျာ … ကဗျာထဲက နွေဦး”
Like – 17K Share – 1737
Au NG says:
Bro တို့လည်း ဂရုစိုက်ကြပါနော်.အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်
Hnin Maung says:
2021-07-10 at 6:59 AM
ပြည်သူ(၅၀%)ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးနေပြီ၊ တောက်!
Susu Aung says:
2021-07-10 at 11:53 AM
Love my brother take care ur health.we are together.
2021-07-11 at 5:11 PM
အမွန္ပဲ မင္းတို့ကိုလည္း ျပည္သူကမယုံ မင္းတို့ကလည္း ငါတို့ ဆန့္က်င္ တဲ့ေကာင္ေတြ လို့ျမင္ေနတယ္ သဟဇာတ မျဖစ္ေတာ့ဘူး
2021-07-13 at 5:04 PM
မင်းတို့ခုချိန်မှာနောင်တဆိုတာကို ဘာမှန်းမသိတာလား ပြန်ပြေးပြန်ရင်လဲအသတ်ခံရမှာကြောက်နေတာလား ကို့ဟာကို ပြန်မေးကြည့်ပါလား ခုမင်းတို့ ဟား5ကောင်မဟုတော့ဘူး ဖား5ကောင်ဖြစ်နေတာရောသိရဲ့လား
Nanbabywin Myanmar says:
2021-07-13 at 9:02 PM
2021-07-13 at 10:24 PM
မင်းဒို့ မိန်းမနဲသားသမီးတွေအချေအနေကောင်းရဲလားအရင်မေးကြည့်အုံး မင်းအိမ်ဘေးမှာကိုတုပ်ကြီးအိမ်ငှားနေအုံးမယ်သတိလေးထားအုံး
2021-07-14 at 12:04 PM
2021-07-15 at 6:34 PM
Aung Thu PHyo says:
2021-07-15 at 7:27 PM
Thet Oo Khin says:
2021-07-15 at 10:31 PM
2021-08-05 at 8:52 PM
႐ုပ္ေခ်ာေအာင္ေန မွ ရမွာ
ခ်စ္တယ္ ခ်စ္တယ္ says:
2021-08-07 at 3:11 AM
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလ၏…